11 May 2016 / FPS
Blizzard fanboy ဖြစ်နေရတဲ့ အကြောင်းအရင်းတစ်ချက်က Blizzard အနေနဲ့ သူ့ရဲ့ Game တိုင်းမှာ Cinematic ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ထားတယ်။ Game ထဲ စဝင်လိုက်တာနဲ့ impression တော်တော်ကောင်းတယ်။ Game တိုင်းရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း Tutorial နည်းနည်းပါမယ်၊ ဒါပေမယ့်လည်း အကြာကြီးမဟုတ်ဘူး။ ဆယ်မိနစ်လောက်နဲ့ ကစားတတ်သွားမယ်။
အဲ့လောက်တောင် လွယ်လားဆိုတော့၊ မလွယ်ဘူး။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က FPS တွေ ဆော့နေကြမဟုတ်တော့ ဆော့ဖူးသလောက် FPS game တွေနဲ့ ယှဉ်ကြည့်ရင် တော်တော်လေး ကောင်းတာကိုတွေ့ရတယ်။ Graphic mode မှာ Low, Medium, High, Ultra, Epic ဆိုပြီးတောင်ရှိတယ်။ Epic အထိ ဆော့ဖူးတယ်၊ Graphic ကော Sound ပါ ဘာမှ အပြစ်ပြောစရာ မရှိဘူး။
​MMORPG တွေနဲ့ Overwatch ပဲ အဆော့များနေလို့ တခြား ဂိမ်းအသစ်တွေတောင် မဆော့ဖြစ်တာ တော်တော်ကြာသွားခဲ့ပြီ။ Project Setsuna ကို 2015 E3 ကို ​​မျ
သင် Legion အတွက် ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားပြီးပြီလဲ? YOU ARE NOT PREPARED! ကိုယ်အဓိကထား ကစားမယ့် character ကို ရွေးချယ်ထားပါ။ Legion မှာ အသစ်